Golaha Amaanka oo Qaraar taariikhi ah ka gaarey dalka Siiriya - Gaaloos.com ≡Navigasi Menu
→ Golaha Amaanka oo Qaraar taariikhi ah ka gaarey dalka Siiriya
Golaha Amaanka oo Qaraar taariikhi ah ka gaarey dalka Siiriya
Golaha Amaanka ee Qaramada Midobey ayaa habeenimadii xalay go’aan taariikhi ah ka gaarey xaaladda dalka Siiriya.
Shanta dal ee joogtada ku ah Golaha Amaanka ayaa ka soo shaqeeyey qoraalka maalintii Jimacada, 15 ka dal ee xubnaha ka ah Golaha Amaanka ayaa isku raacey qoraalka dhabaha nabadda ee dalka Siiriya.
Waa markii u horeysey tan iyo markii uu bilowdey dagaalka Siiriya golaha Amaanku isku raaco qaraar khuseeya Siiriya iyada oo kuwii hore dalka Ruushku u isticmaaley VITO.
Qorshahan cusub ayaa ku baaqaya xabbad joojin si toos ah uga dhaqan gasha Siiriya bisha Janaayo 2016, taas oo ay ku xigi doonto in mucaaradka iyo xukuumadda Bashar Asad ay isugu yimaadaan wada xaajood isla bisha janaayo 2016.
Qaraarka la meel mariyey ayaa sheegaya in dadka Siiriya oo keliya ay go’aan ka gaari karaan mustaqbalkooda sidaas darteed muddo 18 bilood gudahood ah dalkaas laga qabto doorasho Qaramada Midoobey ilaalineyso.
Dalalka reer Galbeedka iyo Carabta ayaa ku adkeysanaya in ugu danbeynta uu meesha ka baxo Bashar al-Asad haddase uu a qayb ka ahaado xaaladda kala guurka ah.
Qorshahan ayaan waxba ka soo qaadin labada kooxood ee loo arko in aysan qayb ka noqon karin siyaasadda Siiriya kuwaas oo ay hoggaamiyaan ajaanib isla markaana ku shaabadeysan ururo argagxiso.
Sida muuqata isbahaysiyada Maraykanka iyo Ruushku waxay sii wadayaan duqeynta dhanka cirka ah ee kooxda ISIS iyo al-nusra. Waa ku kala argti duwan yiiin cidda la duqeynayo, Ruushka oo kale waxa uu duqeeyaa xitaa qolada Trukmaanka ee Galbeedka Siiriya, iyo kuwa reer Galbeedku taageero.
Dagaalada Siiriya ayaa bilowdey sanadkii 2011, xilligii kacdoonkii carabta, waxa uu galaaftey boqolaal kun naftood, waxaana ku barakacay Malaayiin qof .